Ny lalao baolina kitra bighead 5 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Aaron Rivas | 13/09/2021 02:43 | Nohavaozina amin'ny 13/09/2021 02:48 | Lalao Android, Finday
Ny soccer dia iray amin'ireo fanatanjahantena mampientanentana indrindra eto an-tany, ary tsy ho an'ny tsy misy, miaraka amin'izay koa, indostria iray izay manetsika amina miliara dolara isan-taona, miaraka amin'ireo sonian'ny mpilalao sy klioban-dalao manan-danja amin'ny làlambe. Noho io antony io ihany dia maro ny lalao finday amin'ity fanatanjahan-tena ity, na ho an'ny consoles na amin'ny solosaina na ho an'ny finday na sehatra hafa.
Ny lalao baolina kitra Bighead no anisan'ny mahafinaritra indrindra ankehitriny. Miaraka amin'ny tarehin-tsoratra sy tarehimarika endrika mampihomehy sy mampiala voly, ireo lalao ireo no misintona indrindra ao amin'ny Play Store. Izany no antony isisihinay lisitra ny lalao baolina kitra bighead 5 tsara indrindra ho an'ny Android. Mazava ho azy, alohan'ny handehanana any dia tsara ny manamarika fa afaka izy ireo ary, avy eo, ireo manana laza tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy ireo.
Etsy ambany no hahitanao andian-dalao 5 lalao baolina kitra tsara indrindra misy loha na loha lehibe ho an'ny finday avo lenta Android. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra.
1 Head Ball 2 - Lalao Soccer amin'ny Internet
2 Head Football LaLiga - Lalao Football 2021
3 Tompondaka amin'ny baolina kitra saribakoly - ligy
Head Ball 2 - Lalao Soccer amin'ny Internet
Head Ball 2 - Ny lalao baolina kitra an-tserasera dia nahazo ny laharana voalohany tamin'ity lahatsoratry ny lalao baolina kitra bighead tsara indrindra ity satria iray amin'ireo vondrom-piarahamonina lehibe toy izany sy fomba lalao iray ahafahanao milalao amin'ny namana amin'ny alàlan'ny Facebook miaraka amin'ny fifandraisana fotsiny amin'ilay kaonty. Izany dia miaraka amin'izay mampiala voly ary mifaninana, satria tsy irery irery no lalaovina, fa manohitra ny tena olona.
Azonao atao ny milalao maody 1v1 amin'ireo mpilalao manerantany, izay vao mainka manaitaitra azy. Mazava ho azy, maro ireo mpilalao efa manana traikefa efa mandroso, ka tsy maintsy hanao fanazaran-tena ianao mba hanandramana mikapoka azy ireo, zavatra tsy lasa mankaleo noho ny fahafinaretana milalao baolina kitra be loha.
Afaka mifaninana ianao Ligy 5 samy hafa, miaraka amina ligin'ny 15 tsirairay avy, ary refeso ny tenanao amin'ny laharam-pahamendrehana anaovan'ny mpilalao maro avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Azonao atao koa ny mandray anjara amin'ny maody Career, izay ahafahanao mahazo sy mamoha bonus, endri-tsoratra ary kojakoja manokana.
Misy endri-tsoratra 125 izay azonao atao hisafidianana mifanaraka amin'ny zavatra tianao sy tianao. Milalaova amin'izy ireo ary tonga mpilalao Head Ball 2. Tsara indrindra ny mamorona ekipa tsara indrindra eran'izao tontolo izao ary lasa mahery indrindra amin'ny rehetra. KOA afaka manatsara ny toetranao ianao, mba hahomby kokoa rehefa mamoaka tanjona, mba hampiasa hery lehibe (18 misy) izay hanampy anao amin'ny lalao. Endri-javatra iray hafa tena mahaliana amin'ity lohateny ity dia ny fivarotana kianja sy mpankafy samihafa, izay manakana ny lalao tsy ho monotonous.
Head Football LaLiga - Lalao Football 2021
Miroso amin'ny lalao faharoa amin'ity lahatsoratra fanangonana ity isika, izay misy vondron'olona mpilalao marobe ihany koa, ary satria efa manana 10 tapitrisa mahery ny fisintomana ao amin'ny Google Play Store ho an'ny Android. Manokana, miresaka momba izany isika Head Football LaLiga.
Izany dia lalao baolina kitra lehibe hafa lehibe Manana sary sy sary mihetsika be pitsiny ary, manintona azy indrindra, manana mpilalao malaza sy fanta-daza manerantany toa an'i Luis Suárez sy Karin Benzema, izy manolotra ny kintana rehetra amin'ny La Liga Espaniola, La Santander.
Iray amin'ireo mampiavaka azy tsara indrindra izany tsy mila fifandraisana Internet ianao raha te hilalao. Azonao atao amin'ny offline izany, raha tianao, ary mandray anjara amin'ny fifaninanana malaza sy fifaninanana izay manana ambaratongam-pahasarotana iray, zavatra iray izay mahaliana azy kokoa. Ary izany ve dia ny handresena ny rehetra sa, farafaharatsiny, ny ankamaroan'ny fifaninanana, mila manatsara ny fahaizanao ianao, zavatra iray azo amin'ny alàlan'ny famohana valisoa sy valisoa ary fampiharana be dia be. Manampy ny fialamboliny izany.
Ity lalao baolina kitra loha loha ity koa dia ahafahanao manatsara ny fahaizan'ny tsirairay an'ny mpilalao voafantina tsirairay, ary koa ny hafainganam-pandehan'izy ireo, tifitra amin'ny kendrena, habeny, mitsambikina ary maro hafa. Amin'izany ianao dia hahita fandresena mora kokoa. Misy koa hery samihafa amin'ny daka izay mahatonga ny tifitifitra ho matanjaka kokoa, toy ny Giant Ball, Destroyer Beam, Gigantation, ary Super Shot.
Etsy ankilany, amin'ny Head Football LaLiga dia azonao atao ny mamorona sy manova ny endri-tsoratra; Manaova olona toa anao ary ataovy lasa mandroso ny ekipanao izy!
Tompondaka amin'ny baolina kitra saribakoly - ligy
Tompondakan'ny Soccer Puppet Soccer - lalao ligy bighead tsara hafa ny ligy, miaraka amina litera tena mahatsikaiky sy olo-malaza avy amin'ny soccer eran-tany. Eo ny saribakoliny hifaninana mafy amin'ireo mpanohitra anao; fehezo izy ireo mba hahatonga azy ireo ho mpandresy amin'ny lalao rehetra lalaovin'izy ireo.
endri-javatra mihoatra ny sivifolo lohan'ny baolina kitra, noho izany ianao dia manana repertoire manan-danja ireo mpilalao hisafidianana. Manana ekipa saribakoly baolina kitra mihoatra ny 30 koa izy, samy tsara noho ny iray hafa. Manolotra kilalao tsotra ihany koa izy io, saingy, ampiana ireo sary sy sary mihetsika an'ny lalao, dia mampiala voly.
Etsy ankilany, Tompondakan'ny Soccer Puppet Soccer - manana ny ligy maody mpilalao roa, izay azo lalaovina amin'ny finday Android iray ihany, saingy miaraka amin'ny efijery fisarahana, mazava ho azy. Ankoatr'izay, ny dinamika amin'ny lalao dia samy hafa be; afaka dribble ianao, mandalo, mahatratra tanjona mahavariana, maloto ary maro hafa. Izy io koa dia mamela ny fanaingoana ny lalao sy ny fanaraha-maso ary mamolavola paikady lalao voafaritra tsara sy tena mahomby, hahazoana ny fiadiana ny tompondaka sy ny fifaninanana.
Toy ny hoe tsy ampy izany, ankoatry ny valisoa sy ny loka, misy koa ny fahaiza-manao izay mahatonga ny mpanohitra anao hanana olana any amin'ny fitsarana; araraoty izy ireo ary manatsara ny vokatrao. Izy io koa dia manana tsena anatiny ahafahanao mividy zavatra isan-karazany amin'ny diamondra azonao azoazo tsindraindray sy tsotra amin'ny filalaovana.
Champions Tompondaka amin'ny baolina kitra saribakoly - ligy ❤️🏆
Head Soccer dia iray amin'ireo lalao baolina kitra lohany tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy, na dia mahazo ny toerana fahefatra amin'ity lahatsoratra fanangonana ity aza izy. Ary manana ny iray amin'ireo dinamika mahaliana indrindra izy, izay tohanan'ny rindrambaiko mandroso, mampiala voly, milamina ary miaraka amin'ny sary manaitaitra, iray amin'ireo tanjaky ny Head Soccer, tsy isalasalana.
Ity lalao baolina kitra loha loha ity Izy io dia misy saribakoly na avatar 89 eo ho eo hisafidianana sy hilalaovana milamina. Izy io koa dia manana fomba lalao fito samy hafa sy mahafinaritra, dia ny Arcade, Tournament, Survival, League, Head Cup, Death Mode ary Fight Mode. Ho fanampin'izany, mifanaraka amin'ny multiplayer amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny serivisy Google Play izy io ary manana fihetsiketsehana sy sary mihetsika mifototra amin'ny fizika, noho izany dia voalamina tsara ny lalao.
Amin'ny lafiny iray, dia iray amin'ireo lohateny tsoahina sy nilalao indrindra tamin'ny finday Android, miaraka amin'ny fisintomana maherin'ny 50 tapitrisa ary lazan'ny kintana 4.2 miorina amin'ny hevitra sy isa maherin'ny XNUMX tapitrisa ao amin'ny Google Play Store. Ka mendrika ny andramana.
Developer: Dofin'ny nofy
Mba hamaranana ity lisitr'ireo lalao baolina kitra bighead tsara indrindra ho an'ny Android ity dia manana isika Puppet Soccer 2014, lohateny tsara iray hafa handaniana ny fotoana sy hamonoana ny fahasosorana raha milalao ny iray amin'ireo fanatanjahantena malaza sy be mpitia indrindra eran'izao tontolo izao isika, saingy miaraka amin'ny fikitika ny fahasoavana.
Nanomboka ny kapoaka manerantany, ary misy firenena 32 sy ekipa izay hisolo tena ny sainam-pireneny amin'ny fifaninanana izay henjana ny fifaninanana ary samy te handresy daholo. Ny tanjonao sy ny tanjonao dia ny handresy azy amin'ny firenenao, ary noho izany dia azonao atao ny mampiasa mpilalao kintana sy kisarisary manana fahaiza-manao tsy manam-paharoa izay manana ny zavatra rehetra ilaina mba handresena amin'ny fifaninanana. Ny fanontaniana dia hoe: manana ny zavatra rehetra ilainy amin'izany ve ianao?
Milalaova ary manatsara fivoarana, raha miatrika firenena hafa amin'ny fifaninanana izay tsy misy toerana ho an'ny resy. Asehoy izay nanaovana anao ary alao ny fandresena toy ny tompon-daka. amin'ny mihoatra ny 90 ny mpilalao amin'ny lalao, izany rehetra izany dia miendrika loha be mampihomehy, fa amin'ny fahaizana mahagaga. Misy ihany koa ny fahefana maro, toy ny siligaoma, ranomandry, fotaka sock, plaster, herin'ny super / mini, ary fitsambikinana lohataona, hahafahanao mandresy ny mpifaninana aminao.
Ity lalao baolina kitra bighead ity ho an'ny smartphone Android koa manana fanaraha-maso namboarina, toe-javatra samihafa ary sary mahafinaritra sy mahafinaritra. Ary koa, toy ny hoe tsy ampy izany dia mampiala voly sy mahaliana ny feon-kira.
Soccer Puppet Soccer 2014 - Soccer ⚽
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao baolina kitra bighead 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Ny finday 10 nahavita be indrindra tamin'ny septambra 2021